Nankatoavin'ny filankevitry ny minisitra italiana ny fepetra hanamafisana ny fizahantany izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Nankatoavin'ny filankevitry ny minisitra italiana ny fepetra hanamafisana ny fizahantany izao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Minisitry ny fizahantany Italiana Massimo Garavaglia
Nankatoavin'ny Filankevitry ny Minisitra Italiana ny fepetran'ny Drafitra Nasionaly momba ny fanarenana sy ny faharetana izay manohana ny orinasam-pizahantany ao amin'ny firenena.
191.5 lavitrisa euros amin'ny loharanon-karena atolotra amin'ny alàlan'ny Fanamboarana sy Faharetana.
Ity drafitra ity dia fitsabahana izay mikendry ny fanarenana ny fahasimbana ara-toekarena sy ara-tsosialy nateraky ny krizy pandemena.
Ny famatsiam-bola dia ahitana ny fampiasam-bola amin'ny sehatra 2 lehibe ho an'i Italia, dia ny fizahan-tany sy ny kolontsaina, amin'ny fampiasana fomba nomerika amin'ny famerenana indray.
Ny National Recovery and Resilience Plan (NRRP) nasehon'i Italia dia manombana ny fampiasam-bola sy ny fonosana fanavaozana tsy tapaka, miaraka amin'ny € 191.5 lavitrisa amin'ny loharanon-karena atolotra amin'ny alàlan'ny Recovery and Resilience Facility ary € 30.6 lavitrisa dia vatsiana amin'ny alàlan'ny Tahiry Complementary napetraky ny Lalàna Italiana. No. 59 tamin'ny 6 Mey 2021, mifototra amin'ny fiovaovan'ny tetibola mandritra ny taona maro nankatoavin'ny Filankevitry ny Minisitra Italiana tamin'ny 15 aprily.
Ny drafitra dia novolavolaina manodidina ny sehatra stratejika 3 zaraina amin'ny sehatra eoropeana: ny nomerika sy ny fanavaozana, ny fifindrana ara-tontolo iainana ary ny fampidirana ara-tsosialy. Izy io dia fitsabahana izay mikendry ny fanamboarana ny fahasimbana ara-toekarena sy ara-tsosialy vokatry ny krizy pandemena, mandray anjara amin'ny famahana ny fahalemena ara-drafitra amin'ny toe-karena italiana, ary mitarika ny firenena amin'ny lalan'ny fifindrana ara-tontolo iainana sy ara-tontolo iainana ary manana iraka 6 izay ahitana fizahan-tany.
Ny “Digitization, Innovation, Competitiveness, Culture” dia mitentina 49.2 lavitrisa euros (izay 40.7 lavitrisa euros avy amin'ny Recovery and Resilience Facility ary 8.5 lavitrisa euros avy amin'ny Fund Complementary) miaraka amin'ny tanjona hampiroboroboana ny fanovana nomerika ao amin'ny firenena, hanohanana ny fanavaozana amin'ny ny rafitra famokarana, ary ny fampiasam-bola amin'ny sehatra 2 lehibe ho an'i Italia, dia ny fizahantany sy ny kolontsaina; amin'ny teny hafa, fomba niomerika amin'ny famerenana indray ny fizahantany sy ny kolontsaina.
Ny Filoham-pirenena Federalberghi, ny fikambanan'ny hotely nasionaly italiana, Bernabo Bocca, dia nilaza fa fanindronana lehibe ho an'ny orinasa sy mpiasa izany, ary nisaotra ny minisitry ny fizahantany italiana, Massimo Garavaglia, izy noho ny nanaiky ny fampiharana ny Federalberghi. Nanohy niteny i Bocca hoe:
“[Ity] dia fampitomboana fahatokisana lehibe ho an'ny orinasam-pizahantany sy ny mpiasa. Ny fepetra nomen'ny didim-panjakana dia manome fandraisana anjara lehibe amin'ny fanombohana, satria izy ireo dia manohana ny fanavaozana ny trano fonenana, miaraka amin'ny fandraisan'anjara tsy averina sy ny fampindramam-bola, ary miaraka amin'ny famoahana ny trosa, mba hiantohana ny fitohizan'ny orinasa. eo amin’ny sehatry ny fizahantany ary miantoka ny filàna sy ny fampiasam-bola ny liquidity.
"Misaotra ny Minisitra Garavaglia izahay noho ny nanaiky ny fangatahan'ny Federalberghi, nampihetsi-po ny fitaovana hanampiana ireo orinasa handresy ity dingana ity izay mbola sarotra ho an'ny maro, ary manao ny fampiasam-bola ilaina hifaninanana amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena henjana."